ကား, Luxury Car ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
BMW Daihatsu Ford Honda Hummer Jaguar Lexus Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Porsche Suzuki Toyota
A/C: Front (317)
Cassette Radio (317)
Pearl White Toyota Mark II 1998 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Silver Toyota Mark II 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: ...
Pearl White Toyota Mark II 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Air...
Pearl White Toyota Crown 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airba...
မြန်မာပြည်မှာ ဇိမ်ခံကား အရေအတွက်ဟာလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ရှိနေပါတယ်။ ဇိမ်ခံကားများကို ရန်ကုန်မှာ အများဆုံး မြင်တွေ့နိုင်ပြီး အခြားသော နယ်မြို့ တွေမှာလည်း မြင်တွေ့ နိုင်ပါသေးတယ်။ ဇိမ်ခံကားမှာ ဆိုရင်လည်း တစ်ပတ်ရစ် ဈေးကွက်က ဝင်တဲ့ တစ်ပတ်ရစ် ဇိမ်ခံကားနဲ့ အခြား ပြင်ပက ဇိမ်ခံကားသစ်များ ဆိုပြီး ၂ မျိုးကွဲပါသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် မြန်မာပြည် ရောက်တဲ့ ဇိမ်ခံကား အများစုက ဂျပန်လေလံ ဈေးကွက်က ဝင်ရောက်တဲ့ တစ်ပတ်ရစ် ဇိမ်ခံကားများ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ရစ်ဆိုပေမယ့် ကားမကောင်းဘူးလို့ မမြင်စေလိုပါဘူး။ ကားရဲ့ အရည်အသွေးကို အေ၊ဘီ အစရှိသဖြင့် တို့မှ ဂရိတ်အမျိုးမျိုးခွဲထားပြီး ကိုယ့် ငွေကြေးအခြေအနေ အလျောက် အရည်အသွေး ကောင်းတဲ့ တစ်ပတ်ရစ် ကားများကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးဝယ်နိုင်တဲ့ ကားတွေထဲမှာ ဇိမ်ခံကား ရဲ့  အမျိုးအစားက ဆလွန်း၊ အက်စ်ယူဗီ ဆိုပြီးတော့ ထပ်ကွဲ ပါသေးတယ်။ အက်စ်ယူဗီမှာဆိုရင် တိုယိုတာ ဆိုက်ကနက် လန်ခရူဆာတို့က ဇိမ်ခံ အက်စ်ယူဗီများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆလွန်းမှာဆိုရင် တိုယိုတာ ခရောင်း နောက်ထွက် မော်ဒယ် များ က ဇိမ်ခံ ဆလွန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာမှာကိုပဲ ဇိမ်ခံကား သီးသန့်ထုတ်တဲ့ လက်ဆက် အမှတ်တစ်ဆိပ်မှာဆိုရင် ဆလွန်းကော၊ အက်စ်ယူဗီကော ဇိမ်ခံ ကားများကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်လေလံထဲမှာ အင်္ဂလန်ဖြစ် ဇိမ်ခံ အက်စ်ယူဗီ ဖြစ်တဲ့ လန်းရိုဗာ များကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်းရိုဗာ တောင်တက် အက်စ်ယူဗီနဲ့ ရိန်းရိုဗာ ဆိုပြီးတော့ ၂ မျိုး ကွဲနေပါသေးတယ်။ ဥရောပ ဖြစ် ကားထဲမှာ ဆိုရင် မာစီဒီး က အမ် ကလက်စ် အက်ယူဗီ ကားအပြင် အက်စ်ကလက်စ်၊ အီးကလက်စ် ဇိမ်ခံ ဆလွန်း များကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီအမ်ဒဗလျူလည်း ရှိပါတယ်။ အမေရိကန် မှာဆိုရင် ဂျနရယ် မော်တာ ဆလွန်းကားများ ရှိနေ ပါတယ်။
ကားသစ် ဇိမ်ခံကားများ ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ အရောက်များတာက တောင်ကိုရီးယား ဘရန်းမှာဆိုရင် ကီရာ ဖြစ်ပြီး ကီရာ အက်စ်ယူဗီနဲ့ ဆလွန်းများကို သိန်း ၁ထောင်အောက်မှာ ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။ ဥရောပ ဘရန်းမှာဆိုရင် မာစီဒီး ၊ ဘီအမ်ဒဗလျူ တို့ကနေ ဇိမ်ခံ ဆလွန်းနဲ့ ဇိမ်ခံ အက်စ်ယူဗီများ ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပြီး အခြားသော ဘရန်းများလည်း ရောက်ရှိပါတယ်။ အခြားသော ဘရန်းဆိုတာက ကုမ္မဏီများ မရှိပေမယ့် ကြားခံ ကားဝယ်ပေးတ့ အေးဂျင့်များက တစ်ဆင့် ဝယ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အမေရိကန်ကား များတောင် ရရှိ နိုင်ပါသေးတယ်။ ဇိမ်ခံကားထဲမှာ ဇိမ်ခံပြိုင်ကားများကလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဇိမ်ခံပြိုင်ကားအဖြစ် လမ်ဘော်ဂီနီ၊ ဖာရာရီ၊ အော်ဒီ ၊ ပေါ်ရှေး တို့လို ကားများကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန် လက်အက် ဆလွန်းနဲ့ အက်စ်ယူဗီ ဇိမ်ခံကားသစ်များကိုလည်း မှာယူပေးသူများလည်း ရှိနေတာမို့ လက်ဆက် ကားများလည်း အရေအတွက် မနည်း ပါဘူး။ ဆလွန်းကို ကြိုက်ကြ စီးကြတဲ့ အကြောင်းအရင်းက အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည် အသုံးပြုဖို့ အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရေအတွက် နည်းတဲ့ မိသားစုမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငွေကြေးချမ်းသာသူတို့က ဇိမ်ခံဆလွန်းကို ဝယ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်များသူများကတော့ သို့တည်းမဟုတ် ခရီးဝေး သွားဖို့ ရည်ရွယ်သူများကတော့ ဇိမ်ခံ အက်စ်ယူဗီများကို ဝယ်ယူကြ ပါတယ်။ Motors.com.mm ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ အသစ်၊ အဟောင်း ဇိမ်ခံကားများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖော်ပြ ထားတာမို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။